Qaramada Midoobey oo dib ugu wareejiyey Dowlada Somalia Maamulka Duulimaadka Hawada Somalia – idalenews.com
Qaramada Midoobey oo dib ugu wareejiyey Dowlada Somalia Maamulka Duulimaadka Hawada Somalia
Kulan adag oo gudaha garoonka diyaaradaha Ee Aadan Cade International Airport ee Magaalada Muqdisho ku dhexmaray wasiirka Warfaafinta, Isgaarsiinta,Boostada,iyo Gaadiidka Cirka iyo Dhulka xukuumadda Soomaaliya mudane C/laahi Ciilmooge Xirsi oo Matalayay dowlada Soomaaliya iyo mas’uuliyiin kasocoto hay’ada Qaramada midoobay u qaabilsan Duulimaadka aduunaka ee lagu magacaabo Ecao ayaa waxa uu u jeedkiisu ahaa in la dhameystiro Dadaal ay dowladu ugu jirtay inay dib ula sooo wareegto maamulka hawada ee dalkeena iyadoo ay si Rasmi ah u kala saxiixdeen wasiirka warfaafinta iyo mas’uuliyiinta kasocotay hay’ada Qaramada Midoobay u qaabilsan duulimaadka caalamka heshiis ay dowladu kula soo wareegeyso maamulka Duulimaadka hawada Soomaaliya.
Kulanka ayaa qaatay mudo saacada ah hase yeeshee ala mahadiis waa lagu guuleystay in lakala saxiixdo Hishiiskan uu dowlada Soomaaliya gacanteeda kusoo galayo koontarool hawada oo mudo 19 sano ah Laga maamulayay xafiiska ay ku leedahay dalka Kenya .
Wasiirka warfaafinta,Boostada,Isgaarsiinta,iyo Gaadiidka Mudane c/laahi Ciilmooge Xirsi oo dadaal Dheer ku bixiyay howshan intii uu xulkan hayay ayaa sheegay inuu guul kusoo dhamaaday shirkan Islamarkaana la kala saxiixday heshiis ka kooban 7 qodob oo dhigaya in lala soo wareegay koontaroolka Hawada Soomaaliya kaasoo si rasmi ah u dhaqangalaya mudo 7 bilood gudahood ah.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in heshiiskan uu dhigayo in dib loogu soo celiyo dalka qalab farabadan Oo lageeyay Kenya si loogu dhiso garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan ee magaalada Muqdisho isagoo intaa raciyay in wixii ka bilowda 1da bisha June ay dowladu wax ka maamuli doonto Howsha horay uga socotay dalka Kenya inta laga soo wareejinayo.
Mudane Ciil Mooge ayaa sidoo kale xusay in marka la dhameystiro qalabka garoonka Muqdisho laxirayo Xafiiska Kenya islamarkaana la ballan qaaday fududeynta tababarada dadkii ka shaqeynlahaa iyo Dhaqaalaha ku baxaya si dhaqso loogu soo wareejiyo gudaha dalka Soomaaliya.
Halkaan ka dhageyso Codka Wasiirka Warfaafinta oo aqrinaya qodobada heshiiska maanta lakala saxiixday
Xukuumada Somaliland oo ku eedeysay Feysal Cali Waraabe inuu u dhuuntay Madaxweynaha Somalia (Sawiro)